A "Isandi" Escape - I-Airbnb
A "Isandi" Escape
Yiza uphumle kule ndawo ipholileyo, igumbi eli-1 elingaphantsi kwegumbi kwindawo ezolileyo enombono weGeorgian Bay ukusuka kumgangatho ongasemva. Ikhitshi eligcweleyo lilindele ubuchule bakho bokupheka (okanye ifriji inokugcina ukutya kwakho!) Ngena kumnyango wangaphambili oqhelekileyo, kodwa wonwabele imfihlo yakho ngocango olukhuselekileyo lwesuite yakho. Iimvumi eziqeqeshiweyo zamkelekile ukuba zisebenzise umntwana omkhulu kwigumbi lokuhlala eliqhelekileyo. Kukho nesithuba sokuziqhelanisa neyoga yemihla ngemihla.
Relax & uphumle kwikhaya lakho lethutyana okanye ikhaya kude nekhaya! Igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elikhulu kunye nekhitshi zonke zikulindele.
4.81 · Izimvo eziyi-62
Indlu ikwicala lasempuma kwibhayi. Indawo esembindini yedolophu ingaphantsi kwemizuzu eli-10 xa uqhuba. Ukufikelela kwiTom Thomson Trail kumgama omfutshane, njengebala lemidlalo ukuba ungathanda ukubukela umdlalo "woHlaselo". Ngethuba e-Owen Sound, khangela i-Harrison Park, i-Farmer's Market, i-Inglis Falls, i-Tom Thomson Art Gallery, i-Gray Roots Museum, i-Roxy Theatre, indawo ye-Hibou Conservation kunye nokunye!
Kuxhomekeke kwixesha lakho lokufika kunye nosuku, ndingafumaneka ukuba ndikubulise. Kungenjalo indibaniselwano kwisitshixo socango lwangaphambili iya kubonelelwa kwaye isitshixo se-suite yakho siya kukulinda! Emva koko kufuneka uzenze ngokwakho ekhaya.
Kuxhomekeke kwixesha lakho lokufika kunye nosuku, ndingafumaneka ukuba ndikubulise. Kungenjalo indibaniselwano kwisitshixo socango lwangaphambili iya kubonelelwa kwaye isitshixo se…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Owen Sound